Ulwahlulo kunye nokuSebenza kokuLawulwa koLawulo loXinzelelo lweRhasi
Imisebenzi Inokwahlulwa ibe ziindidi ezimbini: uhlobo olusembindini kunye nohlobo lweposi ngokwezixhobo ezahlukeneyo, lungohlulwa lube ziindidi ezimbini: inqanaba elinye kunye nenqanaba eliphindiweyo; Ukusebenza Umgaqo Umahluko c ...
1. Ingxolo eveliswe kukungcangcazela koomatshini: Iindawo zokunciphisa uxinzelelo lwegesi ziya kuvelisa ukungcangcazela komatshini xa kuhamba ulwelo Ukungcangcazela koomatshini kungohlulwa ngokweefom ezimbini: 1) Ukungcangcazela okuhamba rhoqo. Olu hlobo lwe-vibra ...
Izizathu kunye nezisombululo zokuVula kwangaphakathi koMlawuli woXinzelelo
Umlawuli woxinzelelo sisixhobo esilawulayo esinciphisa uxinzelelo oluphezulu lwegesi ukuya kwigesi ephantsi koxinzelelo kwaye igcina uxinzelelo kunye nokuhamba kwemveliso yegesi izinzile. Iyimveliso enokusetyenziswa kwaye iyimfuneko kwaye iyinto eqhelekileyo kwinkqubo yombhobho wegesi. Ngenxa yomgangatho wemveliso ...